Cool Emerald: ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ
Hedonistic နည်းကတော့ သာယာဖွယ် ခံစားမှု တွေနဲ့ ပျော်စရာရှာတာ။ ဘီစီ ၄၀၀ လောက်က အာရစ္စတစ်ပတ် (Aristippus) ဆိုတဲ့ လူကြီးနဲ့ သူ့မြေးတို့ ပြောခဲ့ကြဖူးတဲ့ အယူအဆပေါ့။ "လသာတုန်းဗိုင်းငင်" ဆိုသလို ရနိုင်သမျှ သာယာမှု တွေကို ခံစားပျော်မွေ့ သင့်သတဲ့။ ဘောင်တချို့တော့ ရှိတယ်။ သိသာတဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှု ရလဒ်တွေရှိရင်တော့ ရှောင်သင့်တယ် ဆိုတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း လေမှာပျံဝဲရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုရဖို့ ဆယ်ထပ်တိုက်ပေါ်က ခုန်မချဘူးတဲ့။ ရုပ်ပိုင်းခံစားမှုတွေကို စိတ်ပိုင်းထက် ဦးစားပေးတဲ့ သဘောတော့ ရှိပါတယ်။ နိုက်ကလပ်တက်မယ်၊ သောက်မယ်စားမယ်၊ စင်တင်တေးဂီတသွား ပျော်မယ်ပါးမယ် ဆိုတဲ့ထဲ အရစ္စတစ်ပတ်တို့ မြေးအဖိုးလည်း ထိပ်ဆုံးကပါမယ့် သဘောရှိတယ်။
နောက်နှစ်တစ်ရာ လောက်ကြာတဲ့ အခါ အပီကူးရပ် (Epicurus ဘီစီ ၃၄၁) ကပိုပြီး ပြင်းထန်လေးနက်တဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို တိုင်းတာ သတ်မှတ်ပြန်သတဲ့။ ကောင်းမွန်မျှတစွာ စားသောက်၊နေထိုင်မှု မျိုးကို ပျော်မွေ့တဲ့ သူတွေကို Epicurean လို့တောင်ခေါ်ကြတယ်။ သူက အစားအသောက်ကောင်း၊ ဂီတ၊ ယမကာ တွေရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဂုဏ်ကို အားပေးပေမယ့် hedonism လောက် စည်းလွတ်ဝါးလွတ် တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အလွန်အကျွံထက် တန်သင့်ရုံမျိုးကို သာယာတာ။ ရုပ်ပိုင်းရပ်တည်ဖို့ အတွက် စားစရာ၊ နားခိုစရာ၊ ကျန်းမာရေး စတာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှု အတွက် အခြေခံလိုအပ်တာ သုံးမျိုးက
* လွတ်လပ်မှု နဲ့
* အတွေးအခေါ် ပဲတဲ့။
ဆန်းပြားထွေထူးတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကြီးတွေ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ လိုချင်ကြတာ သဘာဝ ဆိုပေမယ့် အဲ့ဒါတွေက တကယ်လိုတဲ့ ဟာတွေ မဟုတ်ဘူး လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ အာဏာလိုချင်တာ၊ ကျော်ကြားမှုကို လိုချင်တာ မျိုးတွေက သဘာဝ မကျဘူး တဲ့။ သူ့အတွက်ကတော့ မြန်မာအိုင်းဒေါမှာ အနိုင်ရလည်း ပျော်စရာ မဟုတ်ဘူးပဲ။
ကိုယ်လိုချင်တယ်လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထင်နေတဲ့ အရာတွေအတွက် စစ်ဆေးစရာ မေးခွန်းတစ်စုံကို အပီကူးရပ် ကပေးခဲ့ပါတယ်။
* အဲဒီအရာရခဲ့ရင် ကိုယ့်ဘဝ အတွက် ဘာတွေပိုကောင်းသွားသလဲ?
* မရခဲ့ရင် ဘာတွေပိုဆိုးသွားမလဲ?
ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပါ။ အိုင်ဖုန်း အနီလေးရမှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖုန်းပြောလို့ရမှာ၊ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ app တွေသုံးလို့ရမှာလား? ဒါမှမဟုတ် လူတိုင်းက ဒါကိုလိုချင်ကြမှာမို့၊ ကိုယ့်မှာ အဲ့ဒါ ရှိရင်၊ သူများအမြင်မှာ ကိုယ်ကပိုမိုက်လောက်တယ် ထင်ပြီး ကိုယ်လည်းလိုချင်တာလား? ဘီစီ ပထမရာစုနှစ်က လူခရိရှပ် (Lucretius) ဆိုတဲ့ ငနဲကြီးကတော့ "လူအများစု ဘာလိုချင်လည်း ပေါ်မူတည်တာက ကိုယ်ဟာကိုယ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာထက် တခြားလူတွေရဲ့ ပေါ်ပျူလာဖြစ်တဲ့ အထင် ပေါ်ပိုမူတည်တယ်" လို့ ဒဲ့ဖဲ့ ဖူးပါတယ်။
သာယာဖွယ် အတွေ့အကြုံ၊ ဘဝ တစ်ခုကို ရတာချင်းအတူတူ တချို့သူတွေ အတွက်က ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပေမယ့်၊ တချို့သူတွေအတွက်က အဲ့ဒီ တူညီတဲ့ဘဝကိုပဲ ကျေနပ်စရာ မရှိဘူးလို့ မြင်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအင်တွေအပေါ် ရောင့်ရဲမှုကလည်း ပျော်ရွှင်မှု ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကို သက်ရောက်ပါတယ်။
ပူစရာတွေလျော့သွားမယ်၊ ဝယ်ချင်တာဝယ်၊ လုပ်ချင်တာတွေလုပ်လို့ ရလာမှာမို့ ငွေပိုရှိလေလေ၊ ပိုပျော်စရာကောင်းလေလေ လို့ အလွယ်တွေးလို့ ရကောင်းရမှာပါ။ လေ့လာမှုတွေ အရ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ဝင်ငွေပိုကောင်းလာလေလေ၊ ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုရလေလေလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တနှစ်ဝင်ငွေ $၇၃၀၀၀ ကနေ $၁၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင် လောက်ရောက်သွားရင် ဝင်ငွေထပ်များလာလဲ သိပ်ထူးမလာတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အခြေခံလိုအပ်ချက် တွေပြည့်စုံပြီးသွားတဲ့ အခါ ကိုယ်ပိုင်ရွက်လှေကြီးဝယ်နိုင်တာ၊ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်ကြီး ဝယ်နိုင်တာတွေက သိပ်ပြီး မထူးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒါထက် သူများထက် ပိုချမ်းသာတဲ့ ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကပဲ ပျော်ရွှင်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တွေ့ရှိမှုတွေအရ ထီပေါက်တာကလည်း သိပ်ပြီးမဟုတ်လှပါဘူးတဲ့။ ရုတ်တရက်ကြီး ခဏတာ ပျော်ရွင်ချမ်းသာသွားပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ပျော်ရွှင်မှု အတိုင်းအတာက အရင်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သိန်းတစ်သောင်းကြီး ကို အိပ်မက်တွေစွတ်မက်နေတာလည်း မှန်ကန်တဲ့ နည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ :P
မပျော်ရွှင်တာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာ ပျော်ရွှင်တာနဲ့ တူလား? တချို့အရှေ့တိုင်း အတွေးအခေါ်တွေမှာ စွဲလမ်းမှု၊ တပ်မက်မှု တွေကို ပယ်ဖြတ်ဖို့ အားပေးတာတွေရှိတယ်။ အာရစ္စတိုတယ် (Aristotle) ကတော့ မှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ခြင်းက ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရင်းခံ လို့မြင်တယ်။ မှန်ကန်ကောင်းမွန်မှုဆိုတာကလည်း အစွန်းနှစ်ဖက် မရောက်ပဲ သင့်တင့်တဲ့ မဇ္ဈိမ ပဋိပဋာ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်တယ် လို့ဆိုခဲ့တယ်။ ဥပမာ သတ္တိရှိတယ် ဆိုတာက သူရဲဘောကြောင်တာနဲ့ အဆင်အခြင်ကင်းမဲ့တာရဲ့ ကြားမှာရှိတာမျိုးတဲ့။ ရှိုပန်ဟောင်ဝါ (Arthur Schopenhauer) ဆိုတဲ့ ဂျာမန်ကြီးကတော့ လူ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လို့လား လို့ သံသယရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှိခဲ့ရင်လည်း ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့၊ လူ့ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ point သုံးခုရှိတယ်လို့ အမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတာတွေပါတဲ့။ တကယ်တော့ ပထမတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 'သင်ကဘာလဲ' ဆိုတာက အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် လူအများစုကတော့ နောက်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ 'ဘာရှိလဲ' နဲ့ 'ဘယ်လိုထင်ကြလဲ' နောက်ကိုပိုလိုက်ကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
အဓိကပြောချင်တာက အခုမှ စရမယ်။ အဟမ်း... အဲ့ဒီတော့ကာ... လမင်းအေး ရေ မင်းဘာလဲ ဆိုတာအတွက် ဖိုင်နယ်နေ့က အကောင်းဆုံး ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီပဲ။ မင်းပြိုင်ဘက်ရဲ့ ယပ်တောင် တချို့တောင် မင်းကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတယ်လေ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဆုနဲ့၊ အထင်တွေကို ဘေးဖယ်ပြီး အကောင်းဆုံး ဆက်ကြိုးစားပါလို့ မြန်မာအိုင်းဒေါ ၂ ပတ်တိတိ အမှတ်တရအနေနဲ့ အားပေးချင်ပါတယ်။ ။
(စာရေးဆရာမ Anne Rooney ရဲ့ The 15-minute philosopher ကို ဖတ်မိပြီး ထင်မိမြင်မိသည်များကို ရေးမိသည်။)